5-ta nooc ee caanaha ugu caansan iyo sida loo helo | Ragga Stylish
Ragga badankood waxay isku dayaan noocyada kala duwan ee rida ilaa ay aakhirka ka helaan midka iyaga ku habboon. Sida ficil ahaan wax kasta oo la xiriira qaabka, Ku dhufashada isha dibiga waa arrin tijaabo iyo qalad ah.
Knobs-ku waxay bixiyaan meel dhexe oo udhaxeysa xiirashada iyo gadhka. Iyagu waa xalka marka aad doorato inaad xirato timaha wajiga laakiin ma jiraan cufnaan ku filan dhabannada si ay u sameeyaan gadh buuxa. Markaas waxaa jira kuwa doorta maxaa yeelay waxay si fudud u jecel yihiin sida ugu habboon iyaga.
1 Koobabka qayb ahaan
1.1 Buro yar
1.2 Buro weyn
2 Burooyin dhameystiran
2.1 Buro Classic
2.3 Burcadda barroosinka
3 Nooca noocee ah in la doorto
4 Sida loo ilaaliyo buro
Koobabka qayb ahaan
Qaybaha qayb ka mid ahi waa kuwa aan ka koobnayn shaarib. Timaha wejiga waxay ku eg yihiin aagga garka waxaana la siin karaa dhowr nooc:
Wax walba wuu xiiraa laakiin timaha bushimaha hoose. Dhererka xariiqda waxay kuxirantahay doorbid shaqsiyeed. Waxay ku sii jiri kartaa balastar yar oo leydi ah oo faruuryaha hoostooda ah ama waxay sii wadi kartaa inay garka u hooseyso si qumman inta aad jeceshahay Noocyada dhaadheer ayaa sidoo kale loo yaqaannaa kuleylka dhabaha.
Kaliya waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid qayb yar oo ka mid ah timaha wajiga, taas oo ah sababta, dhammaan noocyada riyaha, kani dabiici ahaan waa kan u baahan dayactirka ugu yar.
Sidoo kale loo yaqaan buro asalka ah. Waa sidii adhi buuxa, laakiin shaarib la'aan. Timaha aagga garka ayaa loo oggol yahay inay si buuxda u koraan.
Si loo gaaro qaabkeeda dabeecadeed korku wuxuu u baahan yahay inuu gaaro geeska bushimaha. Waxa kale oo muhiim ah in laga xadeeyo dhinacyada si ay u la mid tahay baaxadda afka oo ah muujinta dhexdhexaadka ah.
Burooyinka buuxa waa kuwa ka kooban labada shaarib iyo riyaha. Waxaa jira noocyo kala duwan oo kuxiran qaabkooda, iyo sidoo kale inay labada qaybood isku xiran yihiin iyo in kale. Waxay u muuqdaan kuwo ka macaan badan burooyinka qayb ka mid ah.
Shaarubaha iyo riyaha ayaa u baahan in la isku xiro iyaga oo abuuraya wareeg aan kala go'ayn ama laba jibbaaran afka. Dhammaan noocyada burooyinka, tani waa qaabka ficil ahaan qof kastaa wuxuu ka fakaraa markuu ka hadlayo buro.
Sida kuwa kale, riyaha caadiga ah ayaa la gashan karaa gaaban, dhexdhexaad ama dheer. Tixgeli inaad jarjartid oo aad ka jarto bushimaha hoose garka si aad u hesho natiijo aad u qeexan.
Qaabka Van Dyke wuxuu la mid yahay il go 'buuxa, oo ku kala duwan taas shaarubaha iyo riyaha ma isku xirna. Tixgeli haddii aad ku adagtahay inaad hesho wareeg buuxa oo timo ah ama haddii aad u muuqato mid aad u roon tahay qaabkan.
Si loo gaaro qaabkeeda saddex-geesoodka ah ee gaarka ah, riyaha waa inuu ka yaraadaa shaarubaha. Noocyada dhaadheer, isla qaab saddexagalka rogan ayaa lagu gaarayaa iyadoo buro loo gooyo dhibic iyadoo la adeegsanayo maqas.
Qaabkan shaarubaha iyo riyaha ayaa sidoo kale lakala jaray, laakiin, liddi ku ah waxa ku dhaca Van Dyke, halkan waa ballaca riyaha oo ay tahay inuu ka weynaado kan afka oo uusan aheyn kan kale. In sidan, qaab u eg barroosinka ayaa lagu sawiray timaha wejiga.
Waa riyihii ka yimid 'Ninka Birta ah'. Jilaaga Robert Downey Jr. waa halyeey ka mid ah noocyada riyahalabadaba kaamirooyinka hortiisa iyo gadaashiisa.
Nooca noocee ah in la doorto
Qaabka ugu habboon ee mid waliba waxay kuxirantahay qaabka wajiga. Tusaale ahaan, wejiyada wareega waxay badanaa ka faa'iideystaan ​​burooyin dhaadheer oo duuban. Dhinaca kale, haddii aad leedahay weji dheer, waa fikrad fiican inaad si qotodheer u fikirto. Hadday taasi tahay wajigaaga oo kale, maad ku sii dheereyn dhererkaaga cirridka, wejigaagu wuxuu umuuqan karaa mid aad u dhuuban
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay yihiin tilmaamo wanaagsan oo lagu helo saa'idkaaga marka hore, kuma filna. Waana inaad sidoo kale tixgelisaa xaglaha iyo qalooca afka, garka iyo daanka, kuwaas oo u gaar ah nin walba. Sidoo kale, waa inaad la qabsataa nooca koritaanka. Ragga oo dhami ma laha timo waji leh oo loo qaybiyo si isku mid ah, markay yeeshaanna, badanaa waxay leeyihiin cufnaan kala duwan. Sidaa darteed, adiga kaliya ayaa go'aansan kara mid ka mid ah burooyinka kor ku xusan inay saxan yihiin.
Sida loo ilaaliyo buro
Ama jarista gadhka ama maqas, burooyinka waa in si joogto ah loo jarjaro. Haddii kale, riyo aan iin lahayn ayaa si dhakhso leh ugu beddeli karta wax la kala furfuray oo aan fiicnayn.
In kastoo shaarubaha iyo riyaha badanaa waa loo daayaa isla dhererka, maahan shuruud lama huraan ah. Mid ka mid ah qayb ayaa looga tagi karaa wax yar ka dheer kan kale si loo gaaro qaabka ugu sasabashada badan ee wejigaaga.
Haysashada qaabkeeda ayaa muhiim u ah sida jarista oo kale. Si aad ugu xaddiddo habka loo doortay, waxaad u baahan tahay mandiil. Qalabyada korontada ku shaqeeya iyo mandiilleyda ayaa shaqada qaban kara sidoo kale. Marka qaabka la xushay la sawiray, way fududahay in la ilaaliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Noocyada qanjirka
Prostatitis: sababaha, ogaanshaha, daaweynta iyo ka hortagga